समाचार - फाइबर अप्टिक मीडिया कन्भर्टरको बारेमा तपाईंले जान्नु पर्ने चीजहरू
आजको सञ्चारको अपेक्षित बृद्धि संग, नेटवर्क अपरेटरहरूले डाटा यातायातको निरन्तर बृद्धि र ब्यान्डविथको बढ्दो मागको पूर्ति गर्न अवस्थित नेटवर्क पूर्वाधारमा लगानीको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्दछ। फाइबरको लागि महँगो अपग्रेड र रिवायरिंगको सट्टा फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरहरूले विद्यमान संरचित क्याबलिंगको आयु विस्तार गर्दै लागत-प्रभावी समाधान प्रदान गर्दछ। फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टर कसरी यो प्राप्त गर्न सक्दछ? र तपाइँ यसको बारे कती जान्नुहुन्छ? आज, यो लेखले तपाईंलाई फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरको बारेमा केहि बताउँछ।
फाइबर ओ के हो?ptic मिडिया कन्भर्टर?
फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टर एक साधारण नेटवर्क उपकरण हो जुन दुई भिन्न मिडिया प्रकारहरू जडान गर्न सक्छ जस्तै फाइर्स अप्टिक केबलिंगको साथ मुड्को जोडी। यसको कार्य भनेको तांबे अनशिल्टेड मोडिएको जोडी (यूटीपी) नेटवर्क क्याबलि lightमा प्रयोग हुने विद्युतीय सिग्नललाई प्रकाश तरंगहरूमा रूपान्तरण गर्नु हो जुन फाइबर अप्टिक केबलिlingमा प्रयोग हुन्छ। र फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरले फाइबरमा १ transmission० किलोमिटर प्रसारण दूरी विस्तार गर्न सक्दछ।
फाइबर अप्टिक संचार द्रुत रूपमा विकसित हुँदै जाँदा, फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरले भविष्य, प्रूफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्कमा एक सरल, लचिलो र किफायती सार्न प्रस्ताव गर्दछ। अब यो व्यापक रूपमा घर क्षेत्रहरू, स्थान आपसमा र औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग भएको छ।
फाइबर ओ को सामान्य प्रकारptik Media Converter
आजका कन्भर्टरहरूले ईथरनेट, PDH E1, RS232 / RS422 / RS485 को साथ-साथै मल्टि मोड र एकल-मोड फाइबर र एकल-स्ट्र्यान्ड फाइबर ऑप्टिक्स जस्ता धेरै केबल प्रकारहरू सहित धेरै फरक डाटा संचार प्रोटोकोल समर्थन गर्दछ। र ती प्रोटोकलमा निर्भर गर्दै बजारमा बिभिन्न डिजाइनहरूको साथ उपलब्ध छन्। कपर-टू-फाइबर मिडिया कन्भर्टर, फाइबर-देखि-फाइबर मिडिया कन्भर्टर र सिरियल-देखि फाइबर मिडिया कन्भर्टर तीमध्येका अंश मात्र हुन्। यहाँ यी सामान्य प्रकारका फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरको छोटो परिचय छ।
जब दुई नेटवर्क उपकरणहरू बीच दूरी तांबे केबलि of को प्रसारण दूरी भन्दा बढी, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी एक ठूलो भिन्नता बनाउँछ। यस अवस्थामा, मिडिया कन्भर्टरहरू प्रयोग गरेर तामा देखि फाइबर रूपान्तरणले तामा पोर्ट सहित दुई नेटवर्क उपकरणहरू फाइबर अप्टिक केबलिंगको माध्यमबाट विस्तारित दूरीमा जडान गर्न सक्षम गर्दछ।
फाइबर-देखि-फाइबर मिडिया कन्भर्टरले एकल-मोड र मल्टिमोड फाइबरहरू, र डुअल फाइबर र एकल-मोड फाइबर बीच जडान प्रदान गर्न सक्दछ। यसका साथै, तिनीहरू एक तरंगदैर्ध्यबाट अर्कोमा रूपान्तरण समर्थन गर्दछ। यो मिडिया कन्भर्टरले विभिन्न फाइबर नेटवर्कहरू बीच लामो दूरीको जडान सक्षम गर्दछ।
क्रमिक-बाट-फाइबर मिडिया कन्भर्टरहरूले RS232, RS422 वा RS485 संकेतलाई फाइबर अप्टिक लिंकमा प्रसारित गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू क्रमशः प्रोटोकोल तांबे जडानहरूको लागि फाइबर विस्तार प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, सिरियल-देखि-फाइबर मिडिया कन्भर्टरहरूले जडान पूर्ण-डुप्लेक्स सिरियल उपकरणहरूको स्वचालित रूपमा सिग्नल बौड दर पत्ता लगाउँदछ। RS-5 485 फाइबर कन्भर्टरहरू, RS-२2२ फाइबर कन्भर्टर र RS-2२२ फाइबर कन्भर्टरहरू सामान्य प्रकारका सिरियल-देखि-फाइबर मिडिया कन्भर्टरहरू हुन्।
फाइबर छनौटका लागि सुझावहरू Optic Media Converter
हामी फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टर को सामान्य प्रकार संग परिचित छौं, तर कसरी एक उपयुक्त छनौट गर्न को लागी अझै पनि सजिलो काम छैन। यहाँ सन्तोषजनक फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टर छनौट गर्न को लागी केहि सरल सल्लाहहरु छन्।
१. फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टरको चिप्सले दुबै आधा-डुप्लेक्स र पूर्ण-डुप्लेक्स प्रणालीहरूको समर्थन गर्दछ भनेर स्पष्ट गर्नुहोस्। किनभने यदि मिडिया कन्भर्टर चिप्सले आधा-डुप्लेक्स प्रणालीलाई मात्र समर्थन गर्दछ, यसले गम्भीर डाटा नोक्सान निम्त्याउँदछ जब यो अन्य फरक प्रणालीहरूमा स्थापना गरिएको छ।
२. कुन डेटा दर तपाईंलाई चाहिन्छ स्पष्ट गर्नुहोस्। जब तपाईं फाइबर अप्टिक मिडिया कन्भर्टर छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईं दुबै छेउमा रूपान्तरणको गतिसँग मेल खान आवश्यक छ। यदि तपाईंलाई दुबै गति चाहिएको छ भने, तपाईं दोहोरो दर मिडिया कन्भर्टरहरूलाई विचारमा लिन सक्नुहुन्छ।
M. मेडिया रूपान्तरण मानक IEEE802.3 को साथ लाइनमा छ कि छैन स्पष्ट गर्नुहोस्। यदि यो मानकसँग मेल खाँदैन भने, त्यहाँ अनुकूलता बिल्कुल हुनेछ, जसले तपाईंको कामको लागि अनावश्यक समस्या निम्त्याउन सक्छ।